News - Asynchronous Motor market iji bulie ụtụ ego mma
Asynchronous Motor market iji bulie ego ele ihe anya dị mma
Ntughari ohuru nke akwukwo ahia nke 2020 na Asynchronous Motor Market mejuputara 103 na tebụl data, tebụl, eserese, na eserese nke dị mfe nghọta site na ngosipụta miri emi.
Coronavirus Pandemic (COVID-19) emetụtala akụkụ niile nke ndụ n’ụwa niile. Nke a emeela ọtụtụ mgbanwe na ọnọdụ ahịa. Nkwupụta ahụ na-ekpuchi ọnọdụ ahịa na-agbanwe ngwa ngwa na mbido na mmetụta mmetụta mbụ na nke ọdịnihu.
Moto asynchronous, nke a na-akpọkwa moto induction, bụ moto ọzọ dị ugbu a. Ngwunye stator na-eji ntinye aka nke electromagnetic iji mepụta ihe dị ugbu a na rotor, na moto ahụ na-emepụta ihe, n'ihi ya ọ dịghị mkpa ọ bụla na-adịgide adịgide. Enwere ike kewaa igwe na-enweghị ike ịbanye na ngịga winding na ngịga squirrel n'ụdị windo rotor. Winddị winding bụ moto atọ, na ụdị oghere squirrel nwere moto atọ na otu moto. Enwere ike ijikọta rotor nke squirrel onu induction moto na circuitry na mpụga na moto.
Dịka nyocha na ọmụmụ ihe, ahịa ahụ ebiela na ọnụnọ ya n'ụwa niile. Asynchronous Motor Market Research na-enye nyocha zuru ezu nke Ahịa ma mejupụta ọdịnihu, ihe uto ugbu a, echiche ndị elebara anya, nkọwa, na data ụlọ ọrụ akwadoro.
Ndị na-egwu egwuregwu mba ụwa, ndị ga-apụta wee merie 2020 na Asynchronous Motor Market
Na-enyo anya na 2020, ahịa ụwa niile na-atụ anya na ọ ga-abụ afọ dị mkpa maka Asynchronous Motor Market n'ihe gbasara uto na nnata ego.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ niile edepụtara ma ọ bụ ndị edepụtara aha ha ka ha kwalite ngwa ha maka ahụmịhe onye ọrụ njedebe na ịtọ ntọala ha na-adịgide adịgide na 2020. Akụkọ a lekwasịrị anya ma lekwasị anya na ụlọ ọrụ ndị a gụnyere Bosch Rexroth, SIEMENS, TATUNG, Emerson, SHANDONG HUALI, ABB , STOEBER, GEORGII KOBOLD, SERVAX, TECO, Wolong, HITACHI, Bonda Industry, Dazhong, ANHUI WANNAN, YASKAWA, JLEM, Jiangte, JJE, SchabmÃ¼ller, AMK, HEIDENHAIN, XEMG, SPG, Ydmot, -Beloit, ABM Greiffenberger.
Ọzọkwa, nchọpụta ahụ na-enye nkọwa dị omimi banyere nkwụsịtụ ọkwa mpaghara ka nkewapụtara ka o nwere ike ibute oke ogo ogo, mba ndị nwere oke ahịa ahịa n'oge gara aga na nke ugbu a. Offọdụ n'ime njedebe obodo metụtara ọmụmụ ihe bụ North America (Ekpuchi ya na isi nke 7 na 14), United States, Canada, Mexico, Europe (Ekpuchiri n'Isi nke 8 na nke 14), Germany, UK, France, Italy, Spain, Russia.
Site na amụma Asynchronous Motor gbasaa CAGR% na 2020 yana XXXX kwesiri ịbụ nnukwu elele, ọ dị mma karịa ZZZZ maka 2020.
Uzo nke uzo ahia ohuru na-acho aka na 2020 maka Asynchronous Motor Market
Dabere na ọmụmụ ahịa ahịa AMR, ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya n'ihe gbasara mmasị ndị ahịa dịka ụdị, ngwa ahụ ga-ama aka. Asynchronous Motor market nke nke ahia ga-agabiga akara $ $ na 2020.
N'adịghị ka ngalaba nkewa nke ọma na ụlọ ọrụ dịka nke (dị (Atọ nke Asynchronous Motor, Single-phase Asynchronous Motor) na site n'aka Ndị Ọrụ / Ngwa (Ngwaọrụ Ngwaọrụ, Obere Ntugharị, Akụrụngwa, Nfuli, Igwe Igwe, Igwe Ọkpụkpụ, Mining, Ndị ọzọ).
Usoro 2020 nke Asynchronous Motor market study bụ nkewapụrụ agbachapụ / warara iji gosipụta ntụgharị ọhụụ kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Omume ndị ahịa na-agbanwe agbanwe, olee otu ụlọ ọrụ Asynchronous Motor si kweta?
N'ihi mgbanwe nke mmasị ndị na-azụ ahịa na nyocha banyere nrubeisi azụmaahịa na ntinye akụrụngwa kachasị ọhụrụ, Ndị na-ere ahịa isi na ahịa Global na-anwa ịdọta uche nke ndị ọrụ njedebe ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa site na "Onyinye na ọrụ ndị ọzọ".
Site n'iji teknụzụ kachasị ọhụrụ na nyocha na akụkụ-mkpa, ndị isi egwuregwu na-abanye n'omume ndị ahịa na nhọrọ ha na-agbanwe.
Ọzọ, nnukwu ulo oru mbo ma ọ bụ Refeyim dị njikere itinyekwu ego iji nweta ihe ọkpụkpọ isi ọkpụkpọ na ahịa maka ngwa ma ọ bụ ngwaahịa ọhụụ.
Ebumnuche Nyocha na Ebumnuche
Iji jụọ ma nyochaa ogo ahịa Asynchronous Motor site na mpaghara / mba dị mkpa, ụdị ngwaahịa na ngwa, data gara aga site na 2014 ruo 2018, ma tụọ ma ọ bụ buo amụma na 2026.
Imata usoro nke Asynchronous Motor Market site na ịmara ọtụtụ ngalaba ya.
Iji lekwasị anya na ndị na-egwu egwuregwu ahịa Asynchronous Motor, iji chọpụta, kọwaa ma nyochaa uru, òkè ahịa, ọdịdị asọmpi ahịa, nyocha SWOT, na atụmatụ mmepe n'ime afọ ole na ole sochirinụ.
Interpretkọwa Asynchronous Motor market banyere usoro uto a kapịrị ọnụ, atụmanya, na onyinye ha na ahịa zuru ezu.
Kọrọ zuru ezu ọmụma banyere isi ihe impacting uto nke ahịa (ibu nwere, ohere, ọkwọ ụgbọala, ụlọ ọrụ-kpọmkwem ihe ịma aka na ihe ize ndụ).
Projectmepụta nha Asynchronous Motor Market, gbasara mpaghara ndị dị mkpa, ụdị, na ngwa.
Iji kọwaa mmepe asọmpi dịka ịgbasa, nkwekọrịta, ịmalite ngwaahịa na nnweta na ahịa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nyocha gbasara COVID-19 na Ahịa Motorynet Asynchronous
Daalụ maka ịgụ edemede a, ịnwekwara ike ịnweta ngalaba ọgụgụ isi ama ama ma ọ bụ mpaghara ụdị akụkọ amamihe dị ka North America, Western / Eastern Europe ma ọ bụ Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Site na data ahịa enyere, Research on Global Markets na-enye nhazi dị ka mkpa ụfọdụ si dị. Dee na AMR